Yonke into oyifunayo kufuneka ube ne-puffer fish kwi-aquarium yakho | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi enomlinganiswa ombi, ukusukela oko adumbe xa esongelwa ngomnye. Imalunga nentlanzi ekhukhumeleyo. Yeyosapho lweTetraodontidae kwaye iyintlanzi eyoyikwayo ngelixa iyathandwa ngokukwazi kwayo ukudumba njengebhola.
Ngaba ufuna ukwazi yonke into malunga nentlanzi ekhukhumeleyo?
1 Iimpawu zentlanzi ekhukhulayo
2 Ukuziphatha kunye nokuhambelana
3 Ukutya inyama yentlanzi
4 Iindidi kunye neentlobo kunye nendawo yokuhlala
6 Unonophelo kunye nokuzala kwakhona
7 Izifo kunye namaxabiso
Iimpawu zentlanzi ekhukhulayo
Ekuqaleni, esi silwanyana sibonakala singenabungozi, kodwa xa sisiva sisongelwa okanye sihlaselwa, sidumba njengebhola kwaye sincedwa kukusetyenziswa kwento enetyhefu yokuzikhusela.
Umzimba wayo uyi-mazudo kwaye inentloko enkulu kwaye inkulu kakhulu. Inokufikelela kwi-20 cm ubude, nangona xa igcinwe ekuthinjweni okanye kwitanki leentlanzi azidluli kwishumi. Amehlo ajikeleze ngokumila, makhulu kakhulu kwaye amnyama. Umlomo unemilebe eqinisiweyo kwaye engaphezulu imile okomlomo wesikhwenene. Njengoko ingenazo iimpiko ze-pelvic kunye ne-dorsal fin incinci kakhulu, yahluke kakhulu kwaye ibekwe emva kwesihlomelo se-caudal. Ngokubhekisele kumbala, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka ibalaseleyo kwinxalenye ephezulu yomzimba ngelixa lisemqaleni nasesiswini linombala wesilivere nomhlophe ngakumbi.
Inamachaphaza amnyama kuwo wonke umzimba wayo ayinceda ukuba idibane nokusingqongileyo. I-agile kakhulu kwaye iyakhawuleza. Ubunzima bayo buyahluka ngokuxhomekeke kuhlobo ukusuka kwi-150 gram ukuya kwi-10 kilos. Zizintlanzi ngaphandle kwezikali kwaye zinolusu olungqindilili, olukhombileyo
Ukuba ukhathalelo lwakho luchanekile, unokufumana ubomi obulindelwe phakathi kweminyaka esi-8 ukuya kweli-10.
Intlanzi ekhukhumezayo ayikhuthazwa ukuba ibe nayo etankini nezinye iintlanzi, ukusukela oko Yintlanzi enomlinganiswa ombi kakhulu okhoyo. Ukuba uyibeka ngeentlanzi ezininzi, kunokwenzeka ukuba iyakuphela ibaqwenga xa ibabona bengalindelanga. Iyakwazi ukutya nkqu iisampulu zohlobo olunye.
Ngokuchasene noko, xa iziva isoyikiswa kukuhlaselwa yenye intlanzi, iqala ukuginya amanzi kwaye idumbe njengebhola ide ibe yibhaluni kwaye ayinakutshiswa ngumlomo weentshaba. Kwimeko apho ibanjwa ikhuselekile kwaye iginye, inkqubo yokukhusela i-pufferfish inetyhefu ebulalayo ebizwa ngokuba yi-tetrodotoxin. Kuyingozi kakhulu kwaye kuyityhefu inokubulala abantu abangama-30.
Xa intlanzi ekhukhumezayo isencinci ayinabundlobongela, ngokuchaseneyo. Luxolo kakhulu kwaye luzolile. Nangona kunjalo, njengoko ikhula kuxa isiba ndlongondlongo ngakumbi kunye nomhlaba, ngakumbi nezinye iintlobo, kodwa kunye nemizekelo efanayo.
Iingcali zebhayoloji ezifunda le ntlanzi zikholelwa ukuba ukukwazi kwayo ukudumba kuphuculwe ngenxa yokudada kwayo. Ngesi sizathu, kuye kwafuneka ukuba iphuhlise uhlobo lokhuselo ukunqanda ukutyiwa zezinye iintlanzi. Ke ngoko, xa intlanzi ikhukhumala ihlaselwa ngomnye, endaweni yokubaleka iyadumba. Ezinye iintlobo zale ntlanzi zineentsiba kulusu lwazo ezinceda ukunqanda ukutyiwa.
Ukutya inyama yentlanzi
Inyama yezinye iintlobo zeentlanzi ezikrwada ithathwa njengokutya okumnandi. Ewe kuyimfuneko ukuba umpheki azi indlela yokwahlulahlula ityhefu kwinyama etyiwayo. EJapan Igama lakhe ngu fugu kwaye yaziwa njengexabiso eliphezulu kakhulu kwaye inokulungiswa kuphela ngabapheki abanamaphepha-mvume, abaqeqeshiweyo, abaqeqeshiweyo, njengoko ukusika kakubi kuya kuthetha ukusweleka komthengi
Nokuba umpheki ulunge kangakanani, kukho ukusilela okwenzekayo kwaye oku kubangela ukusweleka kwabantu abaliqela ngonyaka.
Iindidi kunye neentlobo kunye nendawo yokuhlala
Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-120 zeentlanzi ezi-puffer kwihlabathi liphela. Uninzi lwabo bahlala emanzini aselwandle ashushu kunye nolwandle, kodwa abanye bahlala kumanzi amnandi nangamanzi amtyuba. Ezinye iintlobo zilumkisa ngengozi yazo ngamanqaku emzimbeni okanye uhlobo oluthile lombala oqaqambileyo, ngelixa ezinye zinemodeli enamachaphaza evumela ukuba zidibane nokusingqongileyo kwaye zingabonakali.
Bazintlanzi bodwa kwaye bahlala malunga ne-300 yeemitha ubunzulu, ikakhulu kwimimandla yeengqaqa zekorale.
Ukutya kwale ntlanzi kubandakanya ikakhulu izilwanyana ezingenamqolo kunye ne-algae, nangona zine-omnivorous. Itya amaxhoba afana izibungu, izinambuzane, iinkumba kunye neentshulube. Ukuziphatha kwayo kunye nokuyingqongileyo kukuluma yonke into ezayo. Ngomlomo wayo onzima unokwahlula oonokrwece, utye iimbaza, iimbaza kunye neembaza.
Izazinzulu zikholelwa ekubeni ityhefu yazo ebulalayo ivela kwiintsholongwane ezizityayo.
Ezinye iintlobo, zinikwe ungcoliseko olomeleleyo emanzini, Abasesichengeni ngenxa yelahleko yendawo yokuhlala kunye nokuloba okugqithisileyo. Ngokuqhelekileyo ithathwa njengabantu abangasongelwayo ngenxa yenani labemi elizinzileyo.
Unonophelo kunye nokuzala kwakhona
Intlanzi ekhukhumeleyo ifuna amaqondo obushushu I-22 ukuya kwi-26 yeedigri ukulingisa amanzi afudumeleyo kwimimandla yetropiki. Njengoko kungekho dimorphism yesondo, indoda nebhinqa bahluke kakhulu.
Ukuphinda uvelise ezi ntlanzi kwi-aquarium, kufuneka uyilungiselele ngesiseko esingqindilili, icebo lokucoca ulwelo kwaye unikezwe ngokufanelekileyo ngamatye kunye namatye abanokuwasebenzisa ukwenza imiqolomba kunye nokuzimela. I-aquarium kufuneka ibe ne-1,5 yeetyuwa kwilitha nganye yamanzi.
Ukuba yintlanzi e-oviparous, imazi ibeka amaqanda kutyani lwaselwandle kwaye emva kweveki, amaqanda aqala ukuqanduselwa. Kungelo xesha ke apho umama ahamba khona kwaye utata ngoyena ubakhathaleleyo de bafunde ukudada.
Izifo kunye namaxabiso
Intlanzi ekhukhumezayo inokuchaphazeleka nakweyiphi na isifo esiqhelekileyo sentlanzi yase-aquarium, nangona isesichengeni ngakumbi kwizidleleli ezithile ukuba zihlala emanzini amatsha.
Ngokumalunga namaxabiso, kuxhomekeke kuhlobo, zinokwahluka phakathi kwe- € 7,5 kunye ne- € 50.
Njengoko ubona, ezi ntlanzi zahlukile kwaye zikhethekileyo kwindawo yazo yokuhlala, ke ukuba nazo kwitanki leentlanzi ngumceli mngeni ongafanelekanga kubaqalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi entlanzi